Fashion Princess – mangalatra&Hack – Torohevitra Android Cheats
Tianao ve ny mandihy amim-pahamendrehana eo amin'ny gorodona amin'ny akanjo isan-karazany ary ho lasa kintan'ny mpanatrika? Te-hirakitra an-tsoratra ny fotoana mahafinaritra ve ianao ary mandefa ao amin'ny My Twiiiitter mba hahazoana ankihibe an-tapitrisany? Ankehitriny dia azo tratrarina daholo izay tadiavinao!
Azonao atao ny mampiakanjo ny tovovavy amin'ny fomba rehetra tianao! Anisan'izany ny hodiny, FITAFIANA, lafika, sns. Alaivo sary an-tsaina hoe mpaka sary ianao, Omeo endrika tonga lafatra ny modelyo, ary maka sary ara-javakanto tsara tarehy! Amin'ny lalaontsika, efa nanomana zavatra maro mifantina zavatra ho anao hiakanjo ny modely! Hatrany an-tampon-doha ka hatrany an-tongotra, kitapo ho firavaka, afaka MIX ny zava-drehetra araka izay tianao, ary azonao atao ihany koa ny manao akanjo misy lohahevitra samy hafa nomaninay ho anao, toy ny mpamosavy ao amin'ny Magic Academy, ny Snow Queen sy ny Princess Rose!
Rehefa avy miakanjo ny tovovavy, azonao atao ny maka sary ny akanjony tsara tarehy ary mandefa izany amin'ny My Twiiiitter mba hahazoana Thumbs up! Ny Thumbs up dia azo angonina ary azonao ampiasaina hividianana zavatra tianao maimaim-poana!
Mifidiana andiana akanjo tsara tarehy eo amin'ny tany fandihizana, dia mifidiana andiana dingana dihy, tsindrio ny efijery, avelao izy hamirapiratra eo afovoan'ny dihy! Tsarovy fa ny Thumbs up azo amin'ny dihy dia azo ampiasaina hividianana entana ihany koa!
◾Ny fitambaran'ny taovolo rehetra, akanjo an'arivony, sns.
◾Koa amin'ny lohahevitra samihafa dia mahatanteraka ny nofinao isan-karazany!
◾Fotoana mandihy, Fonction media sosialy!
◾ kalitao sary HD, vokatra manokana mahafinaritra, ary traikefa amin'ny lalao tena misy!
Ampidino ny lalao NOW, ary tonga dia tonga amin'ny mahery fo!
Sokajy: Cheats sy Hack na toro-hevitra Tags: CheatsHack, Fashion, Princess
← Solitaire Tripeaks Makeover – mangalatra&Hack SpiritBoom – mangalatra&Hack →